China ahaziri igwe anaghị agba nchara iko karama nnu ose na -emepụta na suppliers | Trimill
Ahaziri igwe anaghị agba nchara Glass karama Nnu ose ...
Professional emeputa N'ihi dị iche iche nha nke Cer ...
The Classic igwe anaghị agba nchara Kemeghi ntuziaka Coffee ...
Ọhụrụ nkwalite Portable Electric kọfị grinder
Mkpa Nnu na Nri ose
Manual Spice Salt Pepper Mill nwere oge dị iche iche
Nnukwu batrị eletriki nnu na ose igwe ESP-1
Emeputa Ose grinder kọfị grinder Efere G ...
2021 Nhazi mma ọkụ eletrik na ose grinder set
Ahaziri igwe anaghị agba nchara Glass karama Nnu ose shakers
Ndị na -ama jijiji nnu na ose ma ọ bụ karama ihe na -atọ ụtọ bụ karama a na -eji na kichin nwere ngwa nri dị iche iche.
Ndị na -ama jijiji nnu na ose ma ọ bụ karama ihe na -atọ ụtọ bụ karama a na -eji na kichin nwere ngwa nri dị iche iche. Ederede bụ iko, seramiiki, plastik, china ọkpụkpụ, igwe anaghị agba nchara na ihe ndị ọzọ. Ụdị karama ụdị ihe dị iche iche aghọọla "ihe omume ụlọ" maka ndị na -ese ihe, etinyela ọtụtụ echiche na akụrụngwa, ụdị na imepụta ihe. N'ọdịdị ejiji, ite ndị na-eme ka ọ dị mma bụ nke igwe anaghị agba nchara na iko yiri ka ọ na-adọrọ anya. Ahịrị ya ndị dị nro, ụdị mara mma na ihe ndị dị mfe yiri ka ọ na -amasịkarị ihe ụtọ ndị mmadụ ọgbara ọhụrụ. Ọnụahịa ahụ dị ọnụ ala, ọ nwere ike bụrụ ihe na -agwụcha na tebụl iri nri.
Ihe ntụgharị nnu na -agbanwe agbanwe bụ nke kacha ewu ewu na usoro ndị na -eme mkpọtụ. A na-akọwa ya n'ụzọ dị mfe ma dị mfe, yana ihe achọrọ dị elu, na agba na ụdị dị iche iche na-ewu ewu karịa n'ezinaụlọ dị mma, nke na-agbakwụnye agba na kichin. Ọ na -abawanye ụtọ nri, n'otu oge ahụ, ọ na -atọkwa anya mgbe etinyere ya na tebụl.
A pụrụ iji otu aka arụ ọrụ ndị na -eme mkpọtụ n'oge, nke dị mfe. Ọ kacha ịdị ọcha karịa ịchekwa condiments na iche site na mpụga. Mkpuchi elu dị elu na -adịchaghị emetọ ma dị ọcha. Ị nwere ike họrọ oke dị iche iche nke ihe na -esi ísì ụtọ site na calibers dị iche iche, ma jiri ya mee ihe ọnụ, nke ka mma. A na -etinye ọmarịcha, okomoko, na ọmarịcha ite mara mma nke anaghị agba nchara n'ime kichin, nke dị ka ọrụ nka. Ha ga -abawanye ụtọ nri nri ndị mmadụ. Ọ bụkwa ezigbo nhọrọ inye ndị enyi.
Companylọ ọrụ anyị dị mma na imepụta ngwaahịa, mmepe na imepụta ya, ma na -akwado ihe ịhazi ndị ahịa chọrọ, naanị ka ị kporie ndụ kichin nke ọma.
Nke gara aga: Onye nrụpụta ọkachamara maka nha dị iche iche nke seramiiki ewepụghị
Nri ose na nnu shaker Nịm
Factory Kpọmkwem 100ml Disposable Manual Nnu A ...
Emeputa Ose grinder kọfị grinder Cera ...
Classic batrị eletrik nnu na ose na nkume igwe nri E ...
The Classic igwe anaghị agba nchara Kemeghi ntuziaka C ...
2021 Mma imewe electric nnu na ose gri ...